Buugga Goobta Wadarta Sokkia 50, ee Isbaanish - Geofumadas
Oktoobar, 2012 Downloads, GPS / Qalabka, topografia
Waqtigaan ka hor akhristaha wuxuu raadinayey buuggan, bilo kadib wuxuu helay isaga oo ii soo diray. Ku soo laabashada raaxada, halkan ayaan ku xiraa si aad u soo dejiso.
Tani waa buug-gacmeedka taleefanka, Sokkia oo rasmi ah, oo Isbaanish ah, oo u adeegta kooxaha:
Waxaan ka tagaa indexka si ay u qabtaan dareenka, dhamaadka ah waa isku xirka download.
1. HESHIISKA LOO HELI KARAA
3. MACLUUMAADKA BULSHADA LASER
4. FADLAN SETTINGS
Qaybaha Qalabka 4.1
Qorshaha 4.2 Mode
4.3 Wireless Tiknooloojiyada
5. Hawlgallada Aasaasiga ah
5.1. Howlgalka furaha muhiimka ah
Saacadaha 5.2 Sawirrada
6. ISTICMAALKA BATTA
6.1 Bixinta bateriga
6.2 Ku rakibida / Ka saarida Bateriga
7. WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY
8. KALA DUWAN IYO HELISTA UJEEDADA
10. XIDHIIDHKA ILAALINTA DHALINYARADA
10.1 Qalabka loo baahan yahay xiriirka Bluetooth
10.2 Dejinta xiriirka ka dhexeeya SET iyo aalad isku xirta Bluetooth
Cabbirka 10.3 iyada oo loo marayo xiriirka Bluetooth
10.4 Diiwaangelinta Macluumaadka / daadinta adoo isticmaalaya xiriirka Bluetooth
10.5 Xidhiidhka iskuxirka xidhiidhka
11. MADAXA QALABKA
11.1 Qiyaas cabbirka xagal toosan oo u dhaxeeya laba dhibcood (Xagal wareeg ah 0 °)
11.2 Xagal toosan oo qiyaasta ah oo loo baahan yahay (Xagal toosan oo xajmi leh)
11.3 Ku celinta xagal toosan
11.4 Cabbiraadda xaglaha iyo foornada xogta
12. QIIMEYNTA DISTANCE
12.1 Hubinta calaamadda soo noqoshada
12.2 Cabbiraadda fogaanta iyo xaglaha
12.3 Soo celinta xogta la qiyaasay
12.4 Miisaanka cabbirka iyo foornada xogta
Qiyaasta 12.5 REM
13. QIIMEYNTA KORONTADA
13.1 Qaybta xogta qalabka korontada iyo xagasha azimuth
13.2 Dejinta xuddunta azimuth ee iskudubaridii hore
13.3 Cabbiraadda isuduwayaasha saddexda-cabbir
13.4 Iskuduwidda Cabbiraadda iyo Dump Data
14. QIIMEYNTA CUTUBKA
14.1 Isku-dubarid cabbiraadda cabbiraadda
Cabbirka 14.2 adigoo sarreeya
15. QIIMEYNTA ARRIMAHA
15.1 Isku xirka qiyaasta saameynta
Qiyaasta 15.2 Stakeout ee masaafada
15.3 REM Qiyaasta Cabirka
16. BEDELIDDA LAYLI
16.1 Qeexida asaasiga ah
16.2 Point of line lineout
16.3 line line line
17. ARDAYDA ARRIM
17.1 Qeexida arc
18. BARNAAMIJYADA DHIBAATOOYINKA
18.1 Qeexida asaasiga ah
18.2 Muujinta qodobbada
20. QALABKA MAGANGELYADA
21. QIIMEYNTA LAGU QAATO
Cabbirka 21.1 ee ay ku barokacaan hal masaafo
21.2 Qiyaasta xagal barbar-dhigga ee barakac
Cabbirka 21.3 ee soo-saarka laba fog
22. QIIMEYNTA WAXYAABAHA LAGA HELO
22.1 Qiyaasida masaafada u dhaxeysa laba ama wax ka badan
22.2 Isbedelka bilowga
23. KALA DUWAN ARRIMAHA DIFAACA
Qiyaasta habka cabbiraadda
24. DIIWAANKA DATA - DIIWAANKA MENU -
24.1 Xogta Xarunta Kaydinta Kaydinta
24.2 Qorista dhibic hore
24.3 Xogta Cabbiraadda Xaglaha
24.4 Diiwaangelinta xogta fogaanta
24.5 Xogta Isku-duwidda Xogta
24.6 Diiwangalinta Xogta Fogaanta iyo Isku-xirka Macluumaadka
24.7 Qoraalada kaydinta
Dib-u-eegista 24.8 ee xogta shaqada
24.9 Tirtir xogta laga helay shaqaale diiwaan gashan
Maaraynta xogta habka xusuusta
25. DOORASHO / XIRIIRKA SHAQADA
25.1 Xulashada shaqada
25.2 Dib u tirinta shaqada
26. DATA DIIWAANGELINTA / ISTICMAALKA
26.1 Diiwaangelinta / tirtiridda xogta laga helo dhibcooyinka la yaqaan
Dib-u-eegida 26.2 ee xogta la og yahay
26.3 Diiwaangelinta / tirtiridda furayaasha
26.4 Dib-u-eegis ku saabsan calaamadaha
27. WAQTIGA LAGU QAADO DATA SHAQADA
27.1 Xogta qashin ka soo qaadashada shaqada ee kombiyutarada
27.2 Dukumiintiyada JOB-ka oo la daabacayo
28. KALA DUWAN MACLUUMAADKA FURASHADA SFX
28.1 Alaabada loo baahan yahay
28.2 Xiriirka dhamaan qalabka
28.3 Bilaabidda iyo Joojinta SFX
28.4 Dejinta sirta
28.5 Diiwaanka Macluumaadka Bixiyeyaasha Internetka
28.6 Diiwaangelinta Macluumaadka Server FTP
28.7 Diiwaangelinta cinwaanka emailka
28.8 U-dirista E-post (Macluumaadka Shaqada)
28.9 Helitaanka emailka SET (isku duwidda xogta)
28.10axaa ku xiran serverka FTP (iskudubarid xogta / xogta shaqada)
28.11Send email u dir SET
Warqadda 28.12Email ee SET
28.13 Xallinta Dhibaatooyinka
Maaraynta Xogta Muujinta
29. ISTICMAALKA MADAXWEYNAHA DIB U HESHO
29.1 Galitaanka qalabka USB-ka / SD-ka
29.2 Doorashada Nooca Warbaahinta
29.3 Kaydinta xogta shaqada ee warbaahinta xasuusta dibadda
29.4 Akhri xogta laga helo qodobbada la yaqaan
29.6 Formating xulashada warbaahinta xasuusta dibadda
30. Beddelidda CONFIGURATION
30.3 Meeleynta shaqooyinka furaha
30.4 Beddel Password
30.5 Soo celinta goobaha caadiga ah
31. DIGNIINTA IYO XIISAHA ​​EREYADA
32. BAARITAANKA IYO DHALINYARADA
Heerka Alidade Heerka
32.2 Heerka wareegsan
32.3 Qalabka Dareemaha
32.6 Maqal ficil ah
32.7 Heerka dheeraadka ah
32.9 Laser Xumad
33. NOOCYADA GARGAARKA
34. NIDAAMKA UJEEDADA
35. QALABKA CUDURADA
36. WAXQABADKA LAGA HELO
Calaamada 38.1 ee Index-ka ah ee Qaab-dhismeedka Qiyaasaha ee Qiyaasaha Jirka Bidixda iyo Jooga Xaqa ah
38.2 Habaynta qulqulka qiyaasta qiyaasta fogaanta saxda ah
Post Previous«Previous Plex.Earth 3.0 Adeegyada WMS ee laga helo AutoCAD
Post Next Kalluun jacayl gubanayaNext »
93 Jawaab ah "Buugga Gawaarida Wadarta Sokkia 50, Isbanish"
valentin_r isagu wuxuu leeyahay:
haddii aad iigu gudbin kartid buugaan boosteejada valentin_r_l@hotmail.com
fadlan waxaad iigu soo diri kartaa buug gacmeedka josemanuce88@gmail.com
Antonio Guio Gomez isagu wuxuu leeyahay:
Suurtagal ma tahay in la beddelo luuqadda kumbuyuutarka 650 ee ingiriiska ilaa Isbaanish?
Jairo isagu wuxuu leeyahay:
Waan ka xumahay Cesar, xafiiska boostada, rodriguezjairo5@yahoo.es
Hi, Cesar, waad i soo diri kartaa buuggan, mahadsanid.
Ciro Towers isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan. Ma wadaagi kartaa buuggan fadlan. Waad ku mahadsan tahay ing.cirotorres@gmail.com
terence isagu wuxuu leeyahay:
Miyaad iiga dhaafi kartaa buuggan fadlan.
Noe Ibarra isagu wuxuu leeyahay:
Isku xirka sanduuqa hoos loo dhigo waa hoos u dhacayaa, waxaan durbadiiba boggay bogga FB mana aha mid firfircoon. Samaritan wanaagsan oo soo dejiyey oo doonaya in mar kale la wadaago?
Ummad Ma xasuusto haddii xarummaha soo-bandhigga LED-ga moodada hore leeyihiin goobtaan. Mid gacan bir ah ma haysto oo aan isku dayo.
Afka guud ee saldhiga 'sokkia' 650 RX ma loo tarjumi karaa Isbaanish? Haddii aad awoodid ... miyaad ii sheegi kartaa sida? Salaan Golgi
waad ku mahadsan tahay fadlan waad tahay qof naxariis badan
RAMIRO HUAMAN DE LA CRUZ isagu wuxuu leeyahay:
I MODELS IYO ARDAYDA QALABKA TOPOGRAPHIC; GPS, GOOBTA GO'AANKA, WAXBARASHADA, HEERKA MACALLINKA, GURI JADWALKA GURIGA
KU SALAYSO DADKAAGA
Martin Morales isagu wuxuu leeyahay:
fadlan i soo dir buuggan. Waad ku mahadsan tahay
Saaxiibayaal fadlan i soo dir buuggan waa mid deg deg ah. Waad ku mahadsan tahay
waad ku mahadsantahay inaad i soo dirto
Saaxiibada aan jeclaan lahaa in buuggani uu yahay mid deg deg ah
juan garcia sanchez isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay buugani wuxuu ii adeegi doonaa wax badan.
GRACIOS UNCLE MACLUUMAAD U TALIYAY CALANKAN ..
Rolando Mota del Campo isagu wuxuu leeyahay:
XAGGEE AYAAN KA HELI KARAA MACLUUMAADKA Adeegga ee SOKKIA SET 650 RX TOTAL
Gerardo Emanuel Hernández Méndez isagu wuxuu leeyahay:
Hada, sidee tahay, haddii aad iigu soo diri kartid buuga taxanaha 50 Rx, waxaan u baahanahay si dagdag ah, sababtoo ah buugga ayaan ku haystaa Ingiriisi, waxaad samayn lahayd cajiin fiican, horey u soo dhigtay.
Carmen Castañeda Lopez isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibo waxaan rajeynayaa in aan u soo dirno buugan si aad u wanaagsan; oo waa hadiyad cid kale; Tani waa emailkayga carcateneda@gmail.com
Frank Jimenez isagu wuxuu leeyahay:
Hi Geofumadas Waxaan u baahanahay buuggan si deg deg ah fadlan haddii aad u soo diri karto ii, horey u abuurto xisaabta sanduuqa dusheeda iyo emailkaygu waa fk5@hotmail.es
Franky isagu wuxuu leeyahay:
Hi, waxaan u baahanahay buuggan, emailkaygu waa fk5@hotmail.es horey u abuuray xisaabta Dropbox
La wadaag shabakada bulshada iyo ka shaqee soo dejintaada
PLACIDO CEDILLO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaad igu siiso buuggan tilmaanta ah ee aan kala soo bixi kari waayey, mahadsanid
Buugga waa la soo dejin karaa midig kaddib markaad wadaagto shabakadaada bulshada.
jorge hector isagu wuxuu leeyahay:
Waan ku faraxsanahay haddii aad iigu soo diri kartid buuga ku qoran luqada Isbaanishka isticmaalka iyo maareynta sokkia ET 650 RX. Waad ku mahadsantihiin.
GONZALO CANO isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan ii sheeg sida aan wax uga bedelo Sokkia Station
duufaan kulul isagu wuxuu leeyahay:
miyaad iiga gudbin kartaa fadlan fadlan
Kaysar isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan waxaad iigu soo gudbin kartaa bogga si aad u soo dejiso buug gacmeedka, salaanta !!!!
Anigu ma soo dejin karo buugga, fadlan ma caawin kartaa !!!
Uuu, horay u joojiyay wadaagista Dropbox.
Hadda oo kaliya waxay qabataa sida Faceboo, ama Twitter
Oliver isagu wuxuu leeyahay:
horey u abuuray xisaabta drobox, sida aan sameeyo si aad u soo dejiso faylka, mahad
Xidhiidhku waa lacag la'aan
Waxaan jeclaan lahaa mahadcelinta isku xirka si loo soo dejiyo buugga, injineerada duugga ah waxay u baahan yihiin inay na cusboonaysiiyaan.
Salaan, waxaan rajeynayaa inaad la wadaagi kartid buuga. Waad ku mahadsan tahay
Thanks. Waxaan rajeynayaa inaad i soo diri karto buugga, waxaan u baahanahay wax badan. Mahadsanid !!!
Euriel isagu wuxuu leeyahay:
Hello Waxaan u baahanahay buugga sababtoo ah ma aanan awoodin inaan soo dejiyo haddii loo soo diro eurielyy@hotmail.com Aad baan ugu faraxsanahay. barakooyinka
Gacaliye G! Waxaan abuuray koontadaydii sanduuq aan la dhigin oo aanan ku qanacsaneyn xariirka la wadaagi karo buugga fadlan, emailkaygu waa luitam@hotmail.com Waad ku mahadsan tahay wax badan !!!
Gacaliye G! tAcabo si aan u abuuro xisaabtahaya sanduuqa hoosta ku yaal oo aan ku faraxsaneyn in xiriirku uu wadaagi karo buugga fadlan ... Waad ku mahadsan tahay
Hello, waxaan jeclaan lahaa in aan la wadaagno buuggan, waxaan u baahanahay, mahad, geofumadas waa bog aad u fiican, waxaan haystaa xisaab furan, boostadaydu waa pianex@hotmail.com
Waxaan horeyba ku siinnay fursad aad ku hesho.
Waxaan horeyba ku siinnay fursad aad ku hesho
Hada, sidee tahay, dabcan waan caawin karaa dadka aan awoodin inay soo dejiyaan buuggan fadlan i soo dir email si aan ugu gudbin karo buuga. Emailkaygu waa heroe111@hotmail.com, salaanta iyo haysashada xaflad farxad leh!
Waxaan haystaa xisaabtayda Dropbox, emailkaygu waa juan.pablo.leniz@gmail.comWaxaan rajeynayaa in aad soo gudbisid, mahadsanid aad u badan.
Marcelo Gallardo N isagu wuxuu leeyahay:
Hada, Waxaan ubaahanahay helitaanka Hagaha, emailkaygu waa mgallardon@gmail.com
Hore ayaan haystaa xisaabta Dropbox
Salaan iyo Hambalyo ku saabsan adeegga aad bixiso
Paco Morán isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantahay dhammaan macluumaadka xiisaha leh ee aad la wadaagto. Shaki kuma jiro inay yihiin lacago qiimo leh.
Waad ku mahadsan tihiin kaalintaan weyn oo aan soo dejisan karo ... Shaki la'aan Geofumadas waa mid ka mid ah boggaga aan jecelahay ee ku saabsan macluumaadka ku saabsan Dhulka, Waxaan kaliya oo rajeynayaa in markaa ka dibna aysan iibin buugga sida Template for Cots-Geodesic Coords .... kor! Salaan
Jorge Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waxaan u baahanahay buuggan, Waxaan rajeynayaa inaad ku wadaagi karto mahad
Fiiri boostadaada, waxaan kuu soo dirnay ogaysiiska qaybta la wadaago.
ercel isagu wuxuu leeyahay:
waad iga caawin kartaa aniga oo horeyba u haysta xisaabta keydoonka laakiin ma aqaan sida loo soo dejiyo. mahadsanid
Waxaan horayba u haystaa sanduuqa Dropbox, laakiin ma aqaan sida loo sameeyo qaabka aad uga caawin karto ii mahadnaqa
Looma baahna in la gubo wixii la soo dejiyey. Gal cinwaankaaga akoonka http://dropbox.com oo waxaad ku dhex arki doontaa galka la wadaago ee loo yaqaan "Geofumadas_shared". Halkaas waxaad ka soo dejisan kartaa buugga.
Emailka aan kuu soo dirnay waydiisanaysaa haddii aad rabto in aad aqbasho gelitaanka faylka la wadaago, waxaadna u baahan tahay inaad gujiso xiriirka aqbalaadda.
Hoog waxaa sidoo kale, iyo raali galin dhibaato aad u badan laakiin waxaa laga yaabaa hai saaxiibada kale ee aan xaalada iyo kale egeomates su'aalo saaxiib, waxaan u leeyihiin in ay soo bixi DropBox ah si ay u helaan buuga iyo galaan martiqaad folder, laakiin waxaan arki madhan, waa in aan ku leeyihiin DropBox ah ku rakibtay kombiyuutarkayga si aan u helo buugga? iyo deguir 5 tallaabooyinka aasaasiga ah ama si gooni? Waxaan rajeynayaa inaadna i caawin karto Antium akhri buuga, oo aad ku mahadsantahay inaad fiiro.
Fiiri e-maylkaaga, oo ay ku jiraan spam. Waa inuu jiraa email kuu sheegaya in lagugu casuumay faylka la wadaago ee Geofumadas. Gudaha waxaa ku yaal buugga.
Egeomates Hello saaxiibo, waan ka xumahay laakiin xitaa aanan u hesho buuga ama wixii tallaabo, iyo leedahay xisaabta ee DropBox laakiinse uma ay soo bixi buuga, waxaan rajaynayaa oo iga caawin kara. Waad ku mahadsantahay dareenkaaga,
Waxaan hore u wadaagnay xiriirka.
Waan ka xunahay inaan hore u haysto xisaabta keyboonka laakiin ma aqaan sida buuggu u muuqdo, waxaan loola jeedaa inaan helayo boosta ama ruxa? emailkaygu waa heroe11111@hotmail.com (waxay yihiin 5 qaar ka mid ah) Waxaan rajeynayaa inay i caawimi karaan, habka aan ugu jeclahay bogga Geofumadas macluumaadkiisa keena Tifaftirka. Waad ku mahadsantahay dareenkaaga.
Jorge Vasquez isagu wuxuu leeyahay:
Waan ku faraxsanahay taageeradaada, waxaan xaqiijinayaa in aan helay oo aan dib u eegay dukumeentiga, waana dhabtii aan raadinayay. Waad ku mahadsan tahay, Ilaahna wuu kuugu mahadnaqayaa.
Subax wanaagsan oo qaali ah ... Waxaan ka hadalay in aan raadinayay buuggan Sokkia 550rx muddo ku dhow hal sano oo aanan ku guuleysan. Laakiin Ilaahay ayaan u mahadnaqay boggaan waxaanan horay u furay akoontiga dhibcaha ah ee uu yahay javh2179@hotmail.com Waxaan rajeynayaa inaad iga caawin karto madaama aan haysto waqtigii aan qalabka laheyn oo aanan isticmaali karin. horaanba uga mahad celineynaa waxtarka
JAir isagu wuxuu leeyahay:
yair_sas@hotmail.com Waxaan haystaa sanduuq dhibcane ah oo aan ugu mahadcelinayo wadaagista
Haa, hubi boostadaada, waxaan horeyba ku siinnay fursad aad ku hesho
JUAN DAVID isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ilaaway inaan kuu sheego in aan horey u leeyahay xisaab
Waxaa jira xeerar ku saabsan helitaanka buugga.
Waxaad xisaabta ku fureysaa Dropbox, waxaanan ku siinayaa.
Salaan, Waxaan xiiseynayaa buuggan xtkia 650x fadlan ii soo dir waxaan u baahanahay inaan ogaado dhammaan
Fiiri boostada, waa inaad martiqaad u dirtaa galka Geofumadas_shared
Waxaan xiiseynayaa buug-gacmeedka iyo horayba u abuuray xisaabta sanduuqa hoosta, boostada jebmunoz86@gmail.com
Waxaan horeyba ku siiyay fursad aad ku hesho, hubi boostadaada.
Waxaan horeyba u heystaa inta badan ee Dropbox ka dhigi karto buug-gacmeed ee sokkia dhigay xNUMXx mahadsanid mahad
Maqaalka ayaa tilmaamaya sida loo heli karo buugga.
Waa inaad xisaab ku leedahay Dropbox, oo na soo wargelisaa si aan kuu siino.
Maqaalkani wuxuu sheegayaa in buugga aan loo dirin boostada.
Waa inaad xisaabta ku furto Dropbox iyo markaad haysato, waxaad heli doontaa buugga.
ADAN isagu wuxuu leeyahay:
HADDII WAA MAXAY WAXAY TAHAY ILAALINTA PORFA, URGENT ILA AAD QAADAY
FADLAN KU HELI ILAALINTA CODSIGA 650 RX SERIES
Ii soo dir Manual of SOKKIA SET 50 RX SERIES FADLAN
Benito fernandez hernandez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan horey u leeyahay akoon leh sanduuq lagu tuuro waad ku wadaagi kartaa buugga Isbaanishka ee waan xiiseynayaa.
boqorada maury isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo dirto Buug-gacmeedka maadaama ay tahay mid macluumaad wanaagsan ku soo kordhinaysa
Waad mahadsan tahay !!!!!
Waxaan hore u wadaagnay faylka
Salaan, ma haysto taxane 50 laakiin 620K, waxaan xiiseynayaa tarjumaadda.
Hore ayaan haystaa xisaabta sanduuqa
daal iyo quraac isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan horeyba u haystay xisaabta, mahadsanid, waxaan sugayaa buugan tan iyo saldhigga aan ku imaado oo kaliya Ingiriisi.
Waxaan horeyba u haystaa xisaabteyda Dropbox fadlan i soo dir buuggan
Iska hubi, mar hore ayaan wadaagay
Abuuray xisaabta keydka, cinwaanka waa; Dhibaatooyinka (at) hotmail.com
Naxariis badani waa taageero aad u fiican
Maqaalkani wuxuu caddaynayaa sida loo helo buugga.
Waxaad fureysaa xisaabta keydka ah oo aad nala socodsiiso, sidaas darteed waxaan wadaagnaa.
LUCIO LEON SUAREZ isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan u soo dejisan karaa buug-yaraha wadarta sokkia
MAYK isagu wuxuu leeyahay:
Naxariistee Mudane G! Waxaan haystaa cunno qashin-qaad ah mana jecli mahadcelinta isku xirka lala wadaagi karo Buug-gacmeedka aad ayaan kuugu mahadsan yahay
Dhamaan jidka ayaa jira.
Waxaad fureysaa xisaabta Dropbox oo aan wadaagno.
Waxaan xiiseynayaa Buugga, sideen u soo dejiyaa?
Buug aad u xiiso badan., Waad ku mahadsan tahay waxtarka